ဒီနေ ့(10-4-2011) မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ MZ+MT ပွဲလေး..... - MYSTERY ZILLION
ဒီနေ ့(10-4-2011) မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ MZ+MT ပွဲလေး.....
April 2011 edited April 2011 in Member ဆိုင်ရာ
ဒီနေ ့(10-4-2011) မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ MZ+MT Anniversary လေး.. တော်တော်လေးကို ပျော်ဖို ့ကောင်းခဲ့ပါတယ်.... အသိပညာ တွေ လဲ အများကြီး ရခဲ့ပါတယ်.... မုန် ့တွေလဲချားခဲ့ပါတယ်... ကိုအိမောင်ရဲ့Professional Web Developer တစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလို လုပ်ရမလဲဆိုတာ လေးကို အ၇မ်းကြိုက်ပါတယ်.. ကျွန်တော် မသိသေးတဲ့ အရာတွေ အများကြီးလဲ သိခွင့်ရခဲ့အတွက် အရမ်းလဲ ၀မ်းသာမိပါတယ်.............. IT တင်မကဘဲ Business ပိုင်းပါ သိခွင့်ရမိတဲ့အတွက် အရမ်း၀မ်းသာမိပါတယ်.. :)Web Design ပြိုင်ပွဲ ၀င်ခဲ့တဲ့ အစ်ကို အမ တွေကိုအားကျမိပါတယ်... နောက်တစ်ခါ လုပ်ရင် ကျွန်တော်လဲ ၀င်ပြိုင်မယ်.. ဟီး... နောက်ထပ််လဲ အမြဲ ကြီး လုပ်နိင်ပါစေလို ့.....ကျွန်တော်ဆုတောင်းမိပါတယ်...
၀မ်းနည်း လိုတ်တာဗျာကျွန်တော် မလာလိုတ်ရ ဘူးဗျာ..
အဲ မှာပြောခဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေ ပြန်လည်ေ၀မျှ ပေးပါလားဗျာ.....။
ကျွန်တော်လည်း မလာနိုင်ခဲ ဘူးဗျာ။ နောက်တစ်ခါလုပ် မှ ပဲ ဆက်ဆက်လာခဲ့တော့မယ်။ နောက်တစ်ခါတော့ မုန့်တွေ ဒီထက်ကောင်းအောင်း ကျွေးမယ်ထင်တယ်။
ကျွန်တော်တော့ နေ့တစ်၀က်နဲ့ပဲပြန်သွားတယ်.. ကိစ္စရှိနေတာနဲ့ .. မနက်ပိုင်း Discussion လုပ်သွားတာလေးတွေတော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ကိုအိမောင်ပြောတာတွေကလည်း အရမ်းမှတ်သားဖို့ကောင်းပါတယ်။
၀မ်းနည်းတာက ကျွန်တော် T-Shirt မရပါ။
I really want to come. But, I amabit busy today.
ကိုစေတန် ပြောတဲ့ ထိ နား ထောင် ဖြစ် ခဲ့တယ်.. ကိုအိမောင် ကိုထူးမြင့်နောင် မအိမွန် ကိုဇော်မင်းတင် BRB ဆွေးနွေး ချက်တွေ သိပ် ကောင် းပါတယ် ။ ကိုငွေ ထွန်း နဲ့ ကိုအိမောင် တိုက နှစ်ယောက် အပြန်အလှန် ဆွေး နွေး တာလေးတွေ ကိုသိပ်ကြိုက်ပါတယ်
Today isaremarkable day in MICT after BarCamp .. I'm really happy .. Thz all ..
Got animes too .. my Laptop will got rest forawhile these night ..
Then, it's enough for the whole "Thingyan Festival". Right? :redface::redface:
ကိုအိမောင်ပြောခဲ့တဲ့ Web Developer တစ်ယောက်တတ်သိနားလည်ထားသင့်သည်များ နဲ ့opensource (Libreworks) ရဲ ့slideshows တွေပါ .. ကိုအိမောင်ကိုလည်းမေးပြီးပါပြီ .. share လို ့ရပါတယ်တဲ့ ..
ဒါကတော့ OpenOffice မရှိတဲ့ သူတွေအတွက် .odp ကို .ppt ပြန်ပြောင်းပေးထားပါတယ် ..
မနက်ပိုင်းပြောသွားတဲ့ ခေါင်းစဉ်ရဲ ့recording က FrozenCity စီမှာ ရှိလိမ့်မယ် .. ကူးမယ်ဆိုပြီးမကူး မိလိုက်ဘူး ..
FrozenCity ရေ တင်ပေးအုံးဟ ...
10 ရက်နေ ့က ကျွန်တော်တို့forum ဖြစ်တဲ့ MZ (Mysteryzillion) နဲ့Myanmartutorials တို ့ပူးပေါင်းခဲ့တဲ့ Anniversary and Web Design Contest ဆုချီးမြှင့်ပွဲကိုသွားဖြစ်ပါတယ်။ Myanmartutorials ဆိုတာလည်း ကို Gipsy ပြောသလို MZ ကလူတွေတော်တော်များများပါနေတာရယ်ကြောင့် ညီနောင်ဆိုဒ်လို ့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး။ အမှန်မှန်တော့မနက်စောစောကတည်းကသွားမလို ့ပါပဲ။ သို ့သော် ကျွန်တော််ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း နောက်ကျမှရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အချိန်ကြတော့ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားလည်းပြီး ၊ အကျင်္ီတွေတောင်ကုန်ရှာပါပြီ။
ကျွန်တော်ရောက်တော့ ကိုသီဟရဲ ့နည်းပညာသမားတစ်ယောက်ရဲ့diary အကြောင်းစပြောပါပြီ။ ပထမဆုံးကွန်ပျုတာ ၊ ပထမဆုံး virus ၊ ပထမဆုံးလက်ဦးဆရာ ၊ ပထမဆုံးစိတ်ဓါတ်ကျမှု ၊ ပထမဆုံး ရေးတဲ့ program ၊ ပထမဆုံး ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ program ၊ ပထမဆုံး၀င်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ forum ၊ ပထမဆုံး တည်ထောင်ဖြစ်တဲ့ website စတာတွေကိုပေါ့ပေါ့ပါးပါးပြောကြားပါတယ်။ တခြားသူတွေကလည်း အဆိုပါ အတွေ ့အကြုံတွေ ရယ်စရာ မှတ်သားစရာနှောပြီး ပြောပြပေးသွားပါတယ်။
ကိုအိမောင်ရဲ့Professional Web Developer အနေနဲ ့အသက်မွေးရင်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကို coverage ပြောပြသွားပါတယ်။ အကုန်အစင်ပြောပြလို ့ရအောင်နည်းတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်တော့ အကြမ်းဖျင်းခေါင်းစဉ်လောက်ပဲပြောပြသွားပါတယ်။ တော်တော်လေးသိသင့်တဲ့အချက်တွေ ၊ ကိုယ်မသိသေးတဲ့အချက်တွေတော်တော်များလာတာကိုလေးတွေ ့ရပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကိုအိမောင် ဟာ သူရဲ့Fairway ဆိုတဲ့ web development group နဲ ့ကျွန်တော်တို ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ Break ပေးတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်ကတော့ သူငယ််ချင်းတစ်ယောက်ပြန်မယ်ဆိုလို ့ပြန်လိုက်ပို ့လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ပြန်လာတော့ ကိုထူးမြင့်နောင် အလှည့် စနေပါပြီ။ နောက်တော့ ကျွန်တော်လည်း anime တွေ ကူးနေရင်းနဲ ့ပဲ နားထောင်နေပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့မမှတ်မိတော့ပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတော်တော်စွဲသွားတာကတော့ ခြင်ဆေးခွေ company တစ်ခုရဲ့Bussiness model အကြောင်းပါပဲ။
နောက်တော့ ကို Brb ပြောတဲ့အလှည့်ထင်ပါတယ်။ Information Security နဲ ့ပတ်သတ်ပြီးပြောပါတယ်။ Hacker ဆိုတာကို လူတော်တော်များများ သူခိုးလို ့ထင်ကြကြောင်း ၊ Hacker ဆိုတာ ဟိုဆိုဒ်၀င် ဒီဆိုဒ်၀င် privilege လုပ်ပြီး Deface Page တင်တာမဟုတ်ကြောင်း ၊ ထိုအလုပ်မှာ Script kiddies တွေရဲ ့အလုပ်ဖြစ်ကြောင်း ၊ Black Hack ဆိုရင်လည်း root access ရတာနဲ ့မိမိတို ့လိုချင်တဲ့ Information ကိုနှိုက်ယူပြီး Backdoor များသာထားခဲ့ကြောင်း ၊ White Hacker ဆိုရင်လည်း Pentest လုပ်ပြီးတာနဲ vulnerabilty report ကို သက်ဆိုင်ရာ company သို ့အသိပေးအကြောင်းကြားလေ့ရှိကြောင်း ၊ Black Box Pentesting နဲ့White Box Pentesting တို ့အကြောင်းကိုလည်း Black Box Pentesting မှာ Source code များမပေးထားသဖြင့် ခက်ခဲပြီး အောင်မြင့်ဖို ့နည်းပါးကြောင်း BlackBox pentesting မှာ ပို၍ခက်ခဲကြောင်း စတာတွေပြောပြသွားပါတယ်။ နောက်သရုပ်ပြတဲ့အနေနဲ့SQL injection ကိုကာကွယ်ရန်အတွက် escape function များအသုံးပြုများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။
ပြီးသွားတဲ့အခါမှတော့ ကိုငွေထွန်းရဲ့Consumer Oriented နဲ ့Cooperation Oriented Bussiness model များအကြောင်းကိုပြောပြသွားပါတယ်။ သူအနေနဲ ့လည်း နှစ်ခုစလုံးနဲ ့အလုပ်လုပ်လျက်ရှိကြောင်း တစ်ခုစီမှာ အားနည်းချက် အားသာချက်ကိုယ်စီရှိကြောင်း ပြောကြားသွားပြီးနောက်မှာ ကျွန်တော်တို့SWOT analysis နဲ ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
SWOT ဆိုတာက Strength , Weakness , Opportunity , Threat တို ့ဖြစ်ကြောင်း ၊ အဆိုပါအချက်လေးချက်ကို မည်သည့်အလုပ်ကိုလုပ်ကိုသည်ဖြစ်စေ ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ကြောင်း ၊ ထိုနောက် Potter' s Five Force အကြောင်းရောက်သွားပါတယ်။ Industry , Complement , Competition , Supplier , Buyer တို ့ဆက်စပ်နေပုံကိုရှင်းပြသွားပါတယ်။ နောက်ပိုင်း Open Source ခေတ်မှာကြတော့ potter 's five force နဲ ့သာဖော်ပြဖို ့မလုံလောက်ကြောင်း ၊ နောက် force တစ်ခုအနေနဲ့coopetition အနေနဲ ့ဖော်ပြကြောင်း ပြောသွားပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ စိတ်၀င်စားဖို ့ကောင်းတဲ့စကားလုံးတစ်လုံး ကိုတွေ ့ရပါတယ်။ ဆရာမောင်စူစမ်းတို့ဆရာကျော်၀င်းတို ့ဆောင်ပါးတွေတစ်ချို ့မှာလည်းဖတ်ဖူးပါတယ်။ coopetition ဆိုတာပါပဲ။ ဆိုလိုတာကတော့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုကို ပြုလုပ်နေတာကိုဆိုလိုပါတယ်။ War and peace at the same time လို ့လည်းဆိုပါတယ်။
နောက်တော့ ကိုအိမောင်ရဲ့Open Source နဲ ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ Project များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် Librework ဆို တဲ့ platform တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ May လခန့် ရောက်ရင် Launch လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားပါတယ်။ အဲဒါပြီးတော့ ဆုပေးပွဲစတင်ပါတယ်။ ဆုရရှိတဲ့သူတွေ အကြောင်းကို myanmartutorials website မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ထိုနောက်တွင်တော့ ကျွန်တော်တို့MZ founder ကြီး စိုင်းစိုင်းစေတန်ရဲ့video ဟောပြောပွဲလေးကိုနားထောင်လိုက်ရပါတယ်။ Mobile Development အကြောင်းကိုအဓိကပြောကြားသွားပြီး mobile development မှာတွင်ကျယ်နေတဲ့ platform နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ ios and Andriod တို ့ရဲ့အကြောင်း စျေးကွက်နေရာရရှိမှု ၊ လိုအပ်တဲ့ language များ ၊ လိုအပ်တဲ့ requirement များကိုပါရှင်းပြသွားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်တော့ iOs ထက်စာရင် Andriod သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာ၍ပိုမိုအဆင်ပြေကြောင်း နှိုင်းယှဉ်ရှင်းပြသွားပါတယ်။
ကိုစေတန် ဟာ တချက်တချက်မှာ သ နဲ့တနဲ့မပီတာရယ် စကားပြောခါးနီး သက်ပြင်းရှိုက်သံ တရှုးရှုးက လွဲရင် Video clip လေးဟာလည်းတော်တော်လေးမို်က်ပါတယ်။ :P (just kidding )
အချုပ်အားဖြင့်ပြောရရင်တော့ တော်တော်လေး အသိပညာတိုးပွားပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ပွဲပါ။ လူကတော့ အရမ်းကြီးမများပါဘူး။ ပွဲလည်းပြီး အိမ်ပြန်တော့မှသိလိုက်ရတာကတော့ ကျွန်တော် ကူးခဲ့တဲ့ anime တစ်ချို ့က ဘယ်လိုကနေဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့လည်းမသိဘူး ပါမလာပါဘူး။ ဒီပွဲကိုကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ ကိုသီဟအပါအ၀င် sponsor ပေးတဲ့သူများအားလုံး တက်ရောက်ပြောကြားသူများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Recording + Presentation Files ပါ ဒီမှာ ဒေါင်းလို ့ရ ပါ ပြီ ... Thanks ပါ FrozenCity ရေ ...
another mirror for Ko Ei Maung Sound file